Malunga nathi -Chuzhou Meiko Magnetics Co., Ltd.
Umboneleli wakho weSisombululo seMagnetic othembekileyo
UMeiko Magnetics ebesoloko eyigcinile engqondweni ukuba "izinto ezintsha, umgangatho kunye neemfuno zabathengi zingundoqo zeshishini". Siyathemba ukuba ubuchwephesha bethu kwindibano yamagnetic bunokukwazi ukufumana izimvo zakho ezingcono.
Umatshini wokusika isinyithi
Uvavanyo lweMbiza yeMagnet
Iisampulu zePrecast Magnets
Ngezibonelelo zabasebenzi bethu abanezakhono kunye namava abanzi kwimveliso, thina, iMeiko Magnetics, siyakwazi ukuyila, ukuphuhlisa kunye nokwenza zonke izicelo zakho zemagneti. Sivelisa ikakhulu iinkqubo zokubamba ngemagnethi, inkqubo yokucoca ngemagnethi, inkqubo yokuvalwa kwemagneti kumashishini amaninzi, ngesiqhelo njengokusebenza njengokukhangela, ukulungisa, ukuphatha, ukubuyisa, ukwahlula izinto zentsimbi kwiinjongo.
-Isangqa semagnethi / uyilo lokuhamba
-Ukusebenza kwesinyithi sephepha
Ungazifumana zonke iindibano zama-ndfeb ezilinganiselweyo apha